Bologna, fitsangatsanganana an-tanànan'ny fahalalana | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Bologna, Inona no ho hita
Iray amin'ireo fiaran-dalamby be olona indrindra any Italia, izay andalovan'ireo serivisy mampifandray ny firenena iray manontolo Bologna. Any avaratra no misy azy, izy no renivohitry ny faritra manankarena Emilia-Romagna ary manana tantara lava sy mahaliana izay nametraka ny mari-pamantarana ny maritrano sy ny fomba amam-panaony.
Raha mikarakara dia mankany Italia ianao dia manoro hevitra anao aho mba tsy hamela izany. Fantatro fa i Florence, Venice na Roma dia toerana manintona kokoa manintona kokoa, fa raha mandany andro roa any Bologna ianao dia hahazo valisoa. Tanàna kely azonao zahana an-tongotra izy io, manolotra gastr gastric tena matsiro sy fotoana tena tsara handehanana miantsena sy handoka ny kolontsainy.
1 Bologna, ilay nianatra
2 Manintona any Bologna
3 Karatra fandraisana Bologna
4 Torohevitra hitsidihana an'i Bologna
Bologna, ilay nianatra
Izany no niantsoana an'io tanàna efa zato taona io. La Docta na La Dotta, fa milaza ihany koa izy ireo Ilay Rossa y The Grassa, izany hoe ny mena sy ny tavy. Io ilay mahay satria manana ny oniversite tranainy indrindra any Eropa, Ilay Mena no izy satria maro amin'ireo tranony no natsangana tamina biriky miloko toy izany ka manana izany feony izany ny foibe manan-tantara, ary io no Fat satria angano ny gastrikanina ary asian'ireo lovia miaraka amin'ny hena sy saosy miorina amin'ny crème. ho an'i Pasta.
Heveriko fa ny iray amin'ireo endri-javatra telo eto an-tanàna ireo dia andriamby mpizaha tany, sa tsy izany? Ny tantara dia milaza amintsika fa taorian'ny fianjeran'ny Fanjakana Romanina dia nanjary sisin-tany nandrahona ny barbarianina hatrany ny tanàna mandra-pahatongan'ny fanjakan'i Lombard. anjerimanontolo dia naorina taonjato maro taty aoriana, tamin'ny 1088, ary nahalala ny fomba hananana ny mpianany Dante, Bocaccio ary Petrarca.
Tamin'ny taonjato faha-50 dia nonina teo anelanelan'ny 60 sy XNUMX ny olona, isa maromaro ho an'ny tanàna medieval. Ny rafitry ny lakandrano sarotra sy avo lenta dia manan-talenta tamin'ny fotoana nandehanan'ny sambo niaraka tamin'ny lamba vita aminy. Ny fianakaviana manankarena dia nanorina tilikambo fonenany, an-jatony ary ny arabe dia nonenana ankoatry ny fiangonana, abbey ary tranom-panjakana maro.
Ny loza tamin'ny alàlan'i Bologna dia nahatratra ny taonjato fahavalo ambin'ny folo ary dia resin'i Napoleon. Taty aoriana dia natambatra ny fanjakana papaly izy ary farany lasa anisan'ny Fanjakan'i Italia tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX. Simba be izy io nandritra ny Ady lehibe IINoho ny maha-zava-dehibe ny fiantsonan'ny lalamby, noho izany dia nanimba ny ankamaroan'ny ivon-toerany manan-tantara ireo baomba an'habakabaka.
Miaraka amin'ity fampahalalana fohy ity ao an-tsaina dia afaka manao sonia anao izahay izao ny zavatra tsy azonao adino any Bologna. Makà!
Manintona any Bologna
El Palazzo Poggi Isaina amin'izy ireo izy: ny foiben'ny oniversite ary misy ireo tranombakoka mitovy amin'izany. Ny lapa dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary misy asa-kanto na aiza na aiza. Mikasika ny tranombakoka dia misy fanangonana zava-dehibe ireo singa anatomika sy fiterahana, antitra mahatalanjona, nefa misy ihany koa ny fanangonana ny tantara voajanahary, optika ary herinaratra, jeografia ary siansa.
El Tranombakoka iraisam-pirenena sy tranomboky mozika Ahitana sora-tanana misy Mozart tanora ary koa zavamaneno. ny Tranombakoka ara-tantara an'ny miaramila Misy miaramila kilalao vita amin'ny taratasy, vy, stucco, plastika ary hazo, sanganasa mahafinaritra. Ao amin'ny Tranombakoky ny vakoka Industrial Izy io koa dia misy milina manan-tantara maro amin'ny famokarana lamba landy, milina hydraulic izay niasa tamin'ny taonjato faha-XNUMX ka hatramin'ny taonjato faha-XNUMX.
El Tranombakoky ny fahasalamana fitsidihana mahaliana ihany koa io. Avy eo ianao dia efa manana tranombakoka mahazatra sy galeria toa ny Pinacoteca Nacional, ny Archaeological Civic Museum, ny Medieval Civic Museum, la Fanangonana zavakanto eo amin'ny fiarahamonina, ny Museum Morandi, ny Museum of Art Modern, ny Tranombakoka sivika an'ny Renaissance ary ny Museum an'i Ebraico. Ny tantaran'ny tanàna dia ao amin'ny Palazzo Pepoli, ny foiben'i Ducati Ao amin'ny ozin'ity marika marika fiara ity izy ireo. Misy koa ny Tranombakok'i Tapestry manan-tantara ary misy tranombakoka atolotra raha tianao ny Ady faharoa: ny Museum an'i Grigoverde. Ahitana senary multimedia marobe izay ahatsapanao fa anisan'ny lozam-pifamoivoizana.
Raha tianao ny fiangonana sy monasitera dia misy ny Museum of San Petronio, Museum of the Cathedral ary ny harena ao aminy, ny Museo di Santo Stefano, trano fitahirizam-bokin'i Benedictine miaraka amina sary hosodoko sy sary hosodoko medieval, ny an'i San Domenico sy ilay an'ny taloha monasiteran'ny San Giovani any Monte. Raha ny marina dia mbola misy tranombakoka maro hafa ka tokony hanao lisitry ny zavatra mahaliana anao ianao ary manafoana ny sasany raha te hahafantatra maromaro ianao ary manam-potoana kely.
Bologna dia manolotra antsika tranombakoka, galeria zavakanto, fiangonana taloha, arkeolojia indostrialy, arkeolojia iraisana, trano manan-tantara sy lapa, loharano, tetezana, lakandrano, tilikambo, tilikambo lakolosy ary làlana manan-tantara hizaha. Mandeha mamaky ny tanàna ianao dia hahita ny tsara tarehy Loharano Neptune, nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX, sanganasan'i Giambologna sy ny Vecchia Loharano, avy amin'ny mpanoratra iray ihany.
Voalazantsika etsy ambony izany Bologna dia tanàna misy lakandrano Ary toy izany koa: misy fantsona maromaro ary eo amin'izy ireo dia afaka mihazakazaka mankany ianao canal delle Moline ary ny Channel Navile izay nandritra ny taonjato fito no lalan-kaleha lehibe indrindra mankany amin'ny Ranomasina Adriatika. Mazava ho azy, raha misy fantsona, misy tetezana, ka ny mandeha dia hiampita ny sasany. Asongadiko io fandehanana io satria Bologna dia tanàna iray hikatsahana an-tongotra noho izany dia manolotra làlana fitsangatsanganana maromaro hijerena azy io.
Ny tena izy dia raha mandeha ianao tamin'ny volana oktobra dia nikarakara fitsidihana maimaimpoana maimaim-poana i Bologna teo ambanin'ny programa Urban trekking. Matetika dia faran'ny herinandro miaraka amin'ny fitsangatsanganana 30 mahery ao an-tanàna. Raha mandeha amin'ny fotoana hafa amin'ny taona ianao, dia afaka misoratra anarana amin'ny fitsidihana tanàna: ny City Tour mitaingina ny bus tsy misy tafo, mandeha amin'ny havoana manodidina ny tanàna voalamina eo anelanelan'ny volana martsa sy jona ary eo anelanelan'ny septambra sy novambra, ny fiakarana amin'ny fiaran-dalamby kely - fiara izay miampita ny portico tantara rehetra ao an-tanàna na ny fitsangatsanganana amin'ny alina.
Karatra fandraisana Bologna
Manana ny azy ny tanàna karatra fihenam-bidy fizahan-tany. Manana ny fahamendrehan'ny 48 ora ary 20 euro ny vidiny. Mety ho an'ny olon-dehibe sy zaza latsaky ny 12 taona izy io. Anisan'izany ny fidirana maimaim-poana amin'ny tranombakoka 10, sari-tanànan'ny tanàna amin'ny fiteny valo miaraka amina làlana manokana tokony hatao ao anatin'ny telo ora, fihenam-bidy any amin'ny trano fisakafoanana sy fivarotana ary ny fahafaha-misafidy eo anelanelan'ny fitsangatsanganana maharitra adiny roa amin'ny ivon-toerana manan-tantara, tapakila 24 ora ho an'ny bisy hifindra iray andro amin'ny fomba tsy voafetra na ny tapakila mankany amin'ny seranam-piaramanidina Marconi.
Azonao atao ny mividy ity karatra ity amin'ny ivon-toerana fampahalalana momba ny fizahan-tany: any Piazza Maggiore na amin'ny seranam-piaramanidina Marconi mihitsy, fa ao amin'ny hotely koa.
Torohevitra hitsidihana an'i Bologna
Ny fotoana tsara indrindra handehanana any amin'ity tanàna ity dia amin'ny lohataona na amin'ny fararano satria mafana ny toetrandro nefa tsy mampatahotra ary satria mbola misy oniversite dia betsaka ny fiainana eny an-dalambe. Eny azonao atao ialao ny volana aogositra satria mampatahotra ny olona ny hafanana ary mankeny amin'ny ranomasina izy ireo, ka mamokatra tanàna somary foana.
Raha tianao ny sinema dia azonao atao ny mifanentana amin'ny fetin'ny Il Cinema Ritrovato, amin'ny fahavaratra, satria apetraka ivelany ny efijery ary ny sarimihetsika kilasika dia vinavinaina ao amin'ny kianja lehibe. Raha tonga amin'ny fiaramanidina ianao dia holazaiko aminao fa misy bisy eo anelanelan'ny seranam-piaramanidina Marconi sy ny tanàna. Misy ny Aerobus izay manao ny dia ao anatin'ny 20 minitra ary mitentina 5 euro eo ho eo, mihoatra izany. Mampidina anao any amin'ny gara izany ary azo vidiana amin'ny tapakila na eo ambonin'ilay fiara ny tapakila.
Avy amin'ny seranam-piaramanidina hafa, Forlì, maharitra iray ora ny bus ary mandany vola kely kokoa ary mamela anao any amin'ny gara, akaikin'ny gara. Samy mandeha an-tongotra 10 minitra avy eo afovoany manan-tantara izy roa ireo. Ary farany, raha tonga amin'ny lamasinina avy any amin'ny faritra hafa any Italia ianao, 48 ora ao an-tanàna dia hamela anao fahatsiarovana mahafinaritra: sakafo mahatalanjona, tranombakoka sasany, fitsangatsanganana amin'ny lakandrano, labiera mangatsiaka gilasy amin'ny fahavaratra ary fiantsenana sasany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Bologna » Bologna, fitsangatsanganana an-tanànan'ny fahalalana